भोजपुरी चलचित्र ‘प्रेमगीत २’मा शिल्पा पोखरेलको अभिनय (टेलर सहित) – Sidha Kura
बिहेको २७ दिनमै यस्तो घटना : बहिनी मरेपछि पेट दुखेर ढलेको भनियो, आफन्त पुग्दा रुवाबासी (भिडियो)
चर्चित नायिका झरना थापा पुगीन् आफ्नी जवान छोरीको विबाह गरिदिने मोडमा
हार्दिक श्र’ध्दाञ्जली,प्युठानमा कार दु’र्घटना हुदा दाङ तुलसीपुरका यीनै हुन् प्रकास आचार्य जसको मृ’त्यु भएको थियो!
यी मान्छेलाई ह्वेल माछाले निल्यो अनि फेरी ३० सेकेण्डपछि थुकिदियो !
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/भोजपुरी चलचित्र ‘प्रेमगीत २’मा शिल्पा पोखरेलको अभिनय (टेलर सहित)
भोजपुरी चलचित्र ‘प्रेमगीत २’मा शिल्पा पोखरेलको अभिनय (टेलर सहित)
काठमाण्डौं । नेपाली फिल्ममा एकसमय निकै चर्चामा रहेकी अभिनेत्री हुन् शिल्पा पोखरेल । उनको निर्माता छवीसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि नेपाली फिल्ममा खासै अभिनय गरेको पाइदैन । तर उनको अभिनय यति बेला भोजपुरी फिल्ममा देख्न सकिन्छ ।
उनी भोजपुरी फिल्म ‘प्रेमगीत २’ मा अभिनय गरेकी छन् । उनी अभिनित फिल्म ‘प्रेम गीत २’को ट्रेलरमा मुख्य अभिनेत्रीको भुमिकामा देख्न सकिन्छ । उनी यस फिल्ममा शिल्पा भोजपुरी स्टार प्रदीप पाण्डेको जोडीका अभिनय गरेकी छन् ।
हालै सार्वजनिक भएको ट्रेलरमा शिल्पा र प्रदीप पाण्डेको प्रेम र उतारचढाव देख्न सकिन्छ । सोनु खत्रीले निर्देशन गरेको यसफिल्मको छायांकन पोखरा आसपासको दृश्य देख्न सकिन्छ ।
फिल्ममा प्रदीप र शिल्पाका अलावा अमित शुक्ला, रम्भा सहानी, रोहित सिंह, सिपी भट्ट, रन्जितकुमार शर्मा, रोहित थापालगायतका कलाकारको पनि अभिनय देख्न सकिन्छ ।
एवी मोहनले लेखेको फिल्मलाई सोनु खत्रीले नै निर्माण गरेका हुन् भने फिल्मका प्रस्तुतकर्ता रत्नाकर कुमार हुन् । यस फिल्ममा अधिकांश नेपाली कलाकार तथा प्राविधिकहरुले काम गरेका छन् । हरि घले लामाको छायांकन भएको फिल्मलाई बन्दे प्रसादले सम्पादन गरेका हुन् ।
फिल्ममा श्री श्रेष्ठको द्वन्द्व, ओम झाको संगीत, कविराज गहतराज, शिव विक, रिकी गुप्ता, विवेक थापाको कोरियोग्राफी रहेको छ । शिल्पाले यसअघि ‘जय शम्भु’ नामक भोजपुरी फिल्ममा पनि अभिनय गरेकी थिइन् ।
टिकटकमा चर्चित नेपाली, जसको यति धेरै छन् आम्दानी र फलोअर्स ?
टिकटकमा भाइरल बन्दै रमेश–कल्पनाको जोडी, कसरी भयो भाइरल ?